Qiso Dhaba :- Kumaan Khasaarin Codkii Aan Siiyay Mayor Abdikarim Ahmed Mooge | Gaaroodi News
“Kumaan Khasaarin codkii aan siiyay Mayor Abdikarim Ahmed Mooge ” Qiso Dhaba
AKHRISO WIIL AHMED LA YIDHAHDO AYAY KU DHACDAY QISADAN
Hargeisa(Gaaroodinews) Sheekadan waxa aan afkiisa aan ka qaaday qofkii ay ku dhacday. Waa Axmed Cabdi Cali oo ka mid ah dhalinta deggan xaafadda XARO AWR Ee magalada Hargeisa .
Axmed wuxu yidhi ” Dhawaan ayaan furay meherad iibisa borotiinada ay cunaan dhalin yarada hiwaayadoodu tahay Jimicsiga. Meherada markii ay bil furnayd ayaan u baahday in aan account ka furto mid ka mid ay Baananka dalka. Nasiib darro way ii suurto geli wayday maadaama aanan lahayn liisan oo meeshuba in yar furantahay. Sidoo kale, waxa caqabad igu noqday qolyaha dawlada hoose oo maalin walba iga raba liisankii iiguna hanjabaya in ay meherada albaabada isugu dhufanayaan.
Intaas ka dib waxan ku qasbanaaday in aan Xarunta degmada tago si aan liisan ka u helo. Meesha waxaan kula kulmay qofka xafiiskaas maamula ee saxeexiisaba liisanku ku baxayo. Warbixin kooban oo uu iga sooyay darajooyinka cashuuraha ay qaasaan ka dib, waxaan ku qasbanaaday in aan mudanaha kaxeeyo oo meesha lafteeda geeyo si uu Itaalka meherada u soo arko iyo cashuurta ku waajibaysa.
Dhaweeye ayaan dalbaday oo labadayadiiba meheradii ayaanu tagnay. Markuu meeshii qiimeeyay wuxu ii sheegay in la iga rabo 900000 sl sh ( sagaal boqol oo kun). Lacagtaasi waxay u kala baxaysaa 600000 sl sh oo lagu samaynayo liisanka iyo 300000 sl sh oo uu isagu qaadanayo si uu hawshaas u dhameeyo.
In kasta oo aanan rabin in aan lacag laaluusha bixiyo, hadana si aanan u cadilmin waxaan is idhi bal aakhirtu wax ka yar intaas bixi oo waxan ka codsaday in uu iga qaado boqol kun laba boqolna iga daayo. Mudanihi intu is xanaajiyay ayuu iska kacay waanu diiday dalabkaygii.
Dhawr cisho ka dib anoo suuqa jooga ayaan xasuustay wiil aanu saaxiibnahay oo ka shaqeeya Dawlada Hoose. Faduul ba ha ahaatee waxaan idhi maad ninkaas wacdid oo haddii uu kuu sheego in uu Mayarki joogo aad u ba tagtid mayor ka qudhiisa.
Wiilkii markaan la hadlay wuxu ii sheegay in Mayor Cabdikariin uu joogo.
Waxan tegay Dawladii Hoose oo khalqi Ilaahay oo Mayor kii doonayaa ay joogaan ana dadkii ayaan ku biiray.
Wax yar ka dib waxaa soo baxay mayorkii dadkii ayaanu mid mid u waraystay. Dadki hawlo cabasho ah ayay u socdeen intooda badani, qaarkoodna waxaabay ugu yimaadeen booqasho oo waxay sheegayeen in ay yihiin asxaabtiisii. Waxa iigu darnaa mid sitay warqad ay ku qorantahay biil ay ku soo dalacday Sompower oo uu ka cabanayay in ay qaali tahay. Qof walba xafiiskii uu hawshiisa ka dhamaysan lahaa ayuu u tilmaamay. Qoladii saaxiibada ahaayeena wuxu yidhi hada qaranka ayaan u shaqaynayaaaye saaxiibkiin CABDIKQRIIN MOOGE Halkaad awal ka heli jirteen ka raadiya. Waxa soo hadhay aniga iyo dhawr qof oo isku koox ah oo wada socda. Sidaan hadalkooda ka dhadhansaday hore ayay u balansanaayeen. Qoladaas wuxu ku yidhi hadda shir ayaan haayad la leeyahay Ee mar kale inooga dhiga, iyaguna waxay ku yidhaahdeen galabta ayanu dhoofaynaa waxaan uu ku yidhi waayahe xafiiskayga sii fadhiista. Anigii ayuu igu soo jeestay ” Haye, maxaan kuu qabtaa adeer”?. Hawl gaar ah ayaan kaa rabaa mayor ayaan ku idhi, ” Waxuu igu yidhi maanta qolo Hayad ah ayaan la kulmayaaye berri ma ii iman kartaa” anoo qoslaya ayaan ku idhi ” Mayor qoyskayagu wa 7 Qof , Lix aan ku jiro ayaa kuu codaysay iyada oo qaar aanu Ilma adeer nahay Musharaxiin yahiin , kuugu maan codayn in aad isoo celceliso” intu qoslay oo uu Gacanta i qabtay ka dib ayuu igu yidhi ” Imtixaan baad tahay ninkaagani, Ina mari” xafiiskii oo qoladii dhoofaysay sii fadhido ayaanu galnay.
Iyagii ayuu ku yidhi ninkaa dhalinyarada ah ma idinka horaysiiyaa, haa ayay yidhaahdeen.
Sheekadii ayaan uga sheekeeyay aniga oo hadal ugu soo xidhay ” Mayor adiga iyo Barkhad Jaamac Batuun markaad soo baxdeen ayaa rajo i gashay oo aan MEHERADA yar furtay, nasiib daro baadaas cashuurtii dawlada ba aan waxba ka yarayn ayaa la iga rabaa”.
” magicii ninkaas?” Ayuu i waydiiyay isaga oo wajigiisa cadho ka muuqato. Ninkii tuuga ayaa ayaaban u naxay oo aan is idhi bilee xaafad biiliyaa. ” Mayor wajigiisa ayaan garanayaa lkn ma aqaan magaciisa” ayaan ku idhi. ” Iska tag hadda oo beri Xarunta Degmeda Ibraahin Kood-buur ha inoo ahaato ayuu igu yidhi”
Subaxnimadii anoo xaafada ka soo baxaya ayaa number aanan garanayni isoo wacay, waan ka qabtay ” Ma Axmed Cabdi Cali baa” “Haa” ” Waxa kula hadlaya Mayor Cabdikariin Axmed Mooge, miyaynaan ku balansanayn Xarunta Degmada kood-buur?” ” Mayor waynu ku balansanayn, hadda ayaan guriga ka soo baxay, guriga iyo Waaxduna waxba isuma jiraan, hadaan kuu imanayaa”.
Waxan galay xafiiska Gudoomiya Degmada KOODBUUR Oo gudoomiyihi aanu joogin kursigiisiina waxa ku fadhiya Mayor Cabdikariin Ahmed Mooge . Markaan salamay ee aan fadhiistay waxa soo galay gudoomiyihii. Isla markiiba Gudoomiyihii ayuu canaan ku bilaabay ” Ma xiligan ayaad xafiiskaaga imanaysaa? Yaa dadka u shaqaynaya markaynu saacadan maqnaano inagii masuuliyiinta ahayn ? “.
Meesha gudoomiyihii dhamaa dhagaha la goosanayo Ee la canaanayo isagoo taagan anigu kursi ayaan ku fadhiyaa. Gudoomiyii naxdin ayuu kurbanayaa mana jawaabayo. Amar wuxu gudoomiyihii ku siiyay in xafiiska aan ka cabanayo maamulkiisa uu bartan soo istaajiyo.
In yar ka dib ninkii odeyga ahaa ayaa albaabka laga soo geliyay. Marku Mayor kii arkay anigiina i arkay ayuu kala qaboobay. “Axmed, ma ninkanaa ninka Laaluush ka qasabka ah ku waydiiyay?” Ayuu i su’aalay. ” waa isaga laftiisa Mayor” ayaan ugu jawaabay.
Isagiina waxa ku bilaabmay hadalo dhamac ka kulul oo aan ka xasuusto ” Mushaharka dawladana waad qaadataa meherad walbana waxaad ka waadaa $40 oo laaluusha sow maaha? Markaa cid walba adaa ka mushahar badan ninyohow, xitaa aniga adaa iga mushahar badan, dadka aad lacagta baada ah ka qaadaysaana waa dadkii laguu igmaday in aad u shaqayso ee mushaharka lagugu siinayay. Mee askarigi, ninkan waad xidhaysaa isla haddq, waa haddii uu qofka uu shaadhka dawlada ku hadiday taas doorto. Axmed, adiga ayay taladu kugu soo wareegtay, ninkaas shaadhka dawlada kugu dhibay hadaad codsato in la xidho waa la xidhayaa” “Mayor anigu waan cafiyay” ayaan ugu jawaabay.
Isagii ayuu ku jeestay ” Axmad wuu ku cafiyay hadaad mar dambe dhaqanka noocaasa ku noqoto se sharcigu kuma cafin doono. Waliba waxaan ku hor keenayaa warbaahinta si cid kasta oo aad wax ka qaaday ay kuu soo dacwayso arinkaagana Maxkamada ayaa loo gudbin doonaa si dadkaasi xaqooda u helaan, hadana Axmex wuxuu xaq kuugu lagaa u qabo”.
Wax ka yar 30 daqiiqo ayaa hawshaydii la iigu dhameeyay aniga oo aan daalin iyo madluum midna ahayn.
Aniga; Axmedow sheekadan ma baahiyaa?